Maamulka gobolka Hiiraan oo Mamnuucay Shilling Soomaaliga uga yimaada Gobollada kale | SAHAN ONLINE
Maamulka gobolka Hiiraan oo Mamnuucay Shilling Soomaaliga uga yimaada Gobollada kale
BELEDWEYNE – Maamulka gobolka Hiiraan ayaa shaaca ka qaaday iney mamnuuceen lacagaha shilling Soomaaliga ah ee uga yimaada gobollada kale ee dalka kadib maalmo sicir barar ah ah oo ka taagnaa deegaanada gobolkaas.
Cumar Aadan Deeqow (Cumar Baadiyow) oo ah Guddoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa waraysi uu siiyey Idaacada Goobjoog kaga hadlay arrimaha la xiriira khilaafka lacagta shilling Soomaaliga ee suuqyada Baladweyne iyo degaanno kale oo gobolka ah ka taagneyd.
Waxa uu sheegay iney badi xaliyeen khilaafkii oo xiligan wax kala iibsashada suuqyada ay caadi kusoo noqotay isla markaana ay soo saareen ammar ah cidna in aysan dibadda gobolka ka keeni karin lacago shilling Soomaali ah.
Guddoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa sheegay in arrintan ay u sheegeen dowladda Federaalka Soomaaliya isla markaana ay u ballan qaaday in dhawaan lacago cusub dalku yeelanayo si looga gudbo lacagahan.
Waxyaabaha aan wax ku xallinay waxaa kamid ah in lacag shilin Soomaali ah, oo aan ahayn middii taalay gobolka aan la isticmaalin, waan qaban doonnaa haddii gobolka lacag badan lasoo geliyo” ayuu yiri guddoomiyaha.
Gobolka Hiiraan ayaa deegaano badan oo kamid ah waxaa lagu soo daabulay lacago shillin Soomaali been abuur ah taasoo keentay in ganacsatada gobolku ay diidaan iney wax ku iibsadaan shilling Soomaaliga.